सयपत्री, तिहार र नेपाली | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
काजकिरिया : १३ होइन ३ दिन →
हामी बाँचुन्जेल कमाउने, खाने, लगाउने, सन्तान जन्माउने र पाल्ने कामभन्दा फरक केही काम गरौँ, जसले हामीलाई अमर बनाउन सकोस् । त्यसका लागि अर्काको रिस, डाह, खुट्टा तान्ने काममा कसैले पनि आफ्नो समय व्यतत नगरौँ । आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमतालाई पहुँचअनुसार प्रस्तुत गर्दै जाऔँ ।
मनमा उल्लास र खुसी छाउने दुई महान् पर्व दसैं र तिहारमध्ये तिहारको रौनक बढ्न थालिसकेको छ । नजिकिँदो तिहारको तयारी धुमधामसँग गर्न थालिएको छ । बत्तीको झिलमिली र फूलको पर्वका रूपले चिनिने तिहारको टीकाको आफ्नै महत्त्व छ । प्रकृतिले समेत साथ दिएको यस मौसममा हराभरा धर्ती, पहेंलपुर अन्नबाली, खुला र कञ्चन नीलो आकाश, मन्दमन्द हावा, मलीन सूर्यको किरण, सयपत्री, मखमली र गोदाबरी फूलको सुन्दरता अनि पारिवारिक मिलनको आनन्द प्राप्त हुनु स्वाभाविकै हो । यी सबैको संयोजनका साथ तिहार मनाउनुको मजा शब्दमा कहाँ प्रकट गर्न सकिन्छ र ? पर्व आगमनको चर्चा जति गरे पनि अपूरै हुन्छ । अनि हर्षोल्लासको व्याख्या गरेर गर्न सकिन्न । यस्तोमा आम नेपाली दाजुभाइ र दिदीबहिनीलाई विशेषतः शुभकामना नपुर्‍याई कहाँ रहन सकिन्छ र १
शुभकामना दिँदादिँदै र लिँदालिँदै दुर्भाग्यवश हामी नेपालीले मनभित्र एउटा निस्तब्ध शंकाको अनि नमीठो आशंकाको सम्झना गर्नैपर्ने हुन्छ कि राजनीतिक कोलाहल र लुछाचुँढीले हाम्रो भविष्य कतै अन्धकार त बन्दै छैन ? आज यिनै शुभकामना व्यक्त गर्ने मन भोलि कतै डाह, ईष्र्या र झै-झगडा तथा अशान्ति र त्रासैत्रासमा बाँच्नुपर्ने त होइन हाम्रो देश कता जाँदै छ ? हाम्रो भाग्य कसले कोर्दै छ ? कतै हामीले नै देशको एउटा भाग्यविधाता खोज्नुपर्ने पो छ कि ? कतै कुनै दिन हामी आफ्नो देश र शासकविहीन पो भइने हो कि ? त्यो अवस्था कदापि नआओस् प्रथम शुभकामना !
मानव मष्तिष्कमा सत्व, रज, तम त्रिगुण छन् । रज, तम गुण त जनावर र पशुपन्छीमा पनि हुन्छ । त्यसैले तिनीहरू सर्वोत्तम हुन सकेका छैनन् । सत्व गुण बढी भएकै कारण हामी श्रेष्ठ छौँ । त्यसैले मानवले सत्व गुणको पालना गर्ने प्रयास गरौँ ! यो पनि राजनीतिमा होमिने शासकले पालना गरे धेरैको उन्नति हुन्छ र मुलुकको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुन्छ । त्यसैले अब सकेसम्म यो देशलाई सञ्जीवनी दिएर बचाउनका लागि सत्व गुणको पालना गरी संविधान निर्माण गर्न सहयोग गरौँ । यो मेरो अर्को शुभकामना !
मानिस जन्मन्छ र मर्छ । जन्मेको प्राणी अवश्य नै मर्छ । कीरा फट्यांग्रालगायत सम्पूर्ण प्राणी पनि जन्मन्छन्, खान्छन् र आफ्नो प्राणको रक्षा गर्छन् । आफ्नै लागि बाँच्छन् र आफ्नै लागि मर्छन् । तिनमा स्वार्थी भावना नभए पनि बाँच अनि बचाऊ भन्ने प्राकृतिक नियम लागू हुन्छ । तर, हामी मानवमा संसारका ती प्राणीको भन्दा फरक मृत्यु हुनुपर्ने हो तर हुन सक्दैन । तर, बाँचुन्जेल गरेका काम र असल कर्तव्य पालनाले मृत्युलाई हामी फरक बनाउँन सक्छौँ । हामी जन्मेपछि हाम्रो समाज र संस्कारअनुसार हामीले एउटा नाम पाएका हुन्छौँ । हाम्रो शरीर अमर बन्न नसके पनि त्यो नामलाई हाम्रो कामले कहीँ न कहीँ हामी अमर राख्न सक्छौँ । त्यसैले हामी बाँचुन्जेल कमाउने, खाने, लगाउने र सन्तान जन्माउने, पाल्ने कामभन्दा फरक केही काम गरौँ । जसले हामीलाई अमर बनाउँन सकोस् । त्यसका लागि अर्काको रिस, डाह, खुट्टा तान्ने काममा कसैले पनि आफ्नो समय व्यतित नगरौँ । आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमतालाई पहुँचअनुसार प्रस्तुत गर्दै जाऔँ । आफ्नो धर्म, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गरी विश्वमा आफैँलाई गौरवका साथ प्रस्तुत गर्दै जाऔँँ । वीरका सन्तान आम नेपालीमा मेरो शुभकामना १
हामीले जन्मँदा रगतको नातासँग गाँसिएर जन्मनु पर्छ । जुन नाता त छँदै छ, त्यो कहिल्यै टुट्दैन । तर, जीवनका आरोह अवरोहमा अन्य थुप्रै नाता पनि जोडिएका हुन्छन् । जसमध्ये केहीलाई छानेर टुटाउनुपर्ने हुन्छ । केहीलाई नजानेर पनि टुटाउनु हुन्न । सुख, दुःखमा आफ्नो स्वार्थले साथ दिने रगतको नाताभन्दा निःस्वार्थ रूपमा विनाचिनजान नै जोडिएका भावनात्मक नाता प्यारा लाग्छन् । जसमध्ये मेरो लेखनलाई माया गर्ने र श्रद्धा प्रकट गर्दै हौसलाका आवाज दिइरहनुहुने मेरा सम्पूर्ण पाठकमा हाम्रो सम्बन्ध प्रगाढ, दीर्घ, निःस्वार्थ र निरन्तर बढिरहोस् भन्दै यी मंगलमय दिनमा अनमोल र असंख्य शुभकामना Û
जीवनमा सुख मात्र हैन, दुःख पनि आउनु पर्छ । जसले हाम्रो मुटुलाई अझ दरिलो र अदम्य बनाउन सहयोग पुग्छ । त्यसैले दुःखमा आत्तिने र सुखमा मात्तिने गर्नु अव्यावहारिक हुनेछ । जीवन सुखदुःखको मेल हो, संघर्ष हो, जीवन एउटा व्यापक सन्दर्भ हो र अर्थ हो । जीवन अमूल्य असाध्य र खुसीले भरिपूर्ण छ । मात्र यसलाई जीउने तरिकाले यसको परिभाषालाई फरक बनाइदिन्छ । त्यसैले अर्काको दुःखमा दुखी हुन र आफ्नो दुःखमा हाँस्न सिकौँ । दुखद् र संकटपूर्ण घडीलाई पनि झलमल पारेर यो खुसीको मौसममा यो रमाइलो जिन्दगीलाई अझ बढी रमाइलो पार्न सबैमा प्रेरणा मिलोस् । यही छ मेरो सबैमा शुभकामना
This entry was posted in धर्म संस्कृती/परम्परा, लेख/रचना, सन्देश. Bookmark the permalink.